Banyere Anyị - Zhejiang AHEM Auto Parts Co., Ltd.
Nabata na AHEM
Zhejiang AHEM Auto Parts Co., Ltd. hiwere na 1993, bụ ọkachamara emeputa nke na akpaaka braking ọcha. Ọ dị na Fengqiao Town Industrial Park, Zhuji, Zhejiang. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke 13,000m², nwere ihe karịrị ndị ọrụ 50 ma na-etu ọnụ usoro nrụpụta tozuru oke yana akụrụngwa nyocha zuru oke dịka nkedo anwụ, stampụ, ngwa ọrụ igwe CNC, ngwaahịa ngwaahịa na usoro mgbakọ.
N'ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe mmepụta ma melite akụrụngwa nyocha usoro yana usoro njikwa mma na-eme ka ntụkwasị obi na ogologo nke braking ọcha. Ejirila ngwaahịa ndị isi na ọtụtụ osisi osisi ndị dị na China, a na-ebupụkwa ngwaahịa ndị a na-aga na ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, America na Middle East, Africa, wdg.
Mepụta ọmarịcha mma bụ anyị mma amụma na azụmahịa echiche.Na ihu nke nsogbu na ohere nke akpaaka ụlọ ọrụ, anyị dị njikere na-akwado ụlọ na ndị mba ọzọ na-azụ ahịa na-enweta ibe uru na-emeri-mmeri ọnọdụ.
Automatic Die Nkedo Onodi
Ịgbado ọkụ Onodi
Goodgbọ njem ngwongwo